स्वास्थ्य/जीवनशैली | Ratopati
पिसाबमा रगत देखिनु कति खतरनाक ? access_timeअसोज ४, २०७८
पिसाब गर्ने प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ नलिँदा धेरै प्रकारका समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उमेरसँगै पिसाब र प्रजनन प्रणालीसँग जोडिएका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी लक्षणहरु सामान्य नै हुन्छ । जसलाई प्राकृतिक मान्ने गरिन्छ । तर, पिसाबसम्बन्धी केही यस्ता लक्ष...
बिहान खाली पेटमा चिया, क्यान्सरको कारण access_timeअसोज ४, २०७८
धेरैले बिहान उठ्ने वित्तिकै चिया पिउने गर्छन् । चिया पिउन सौखिनहरु दिनमा ४ देखि ५ कम चिया पिउने गर्छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने चियाको चर्चाले चिया पिउनु “स्टेटस सिम्बल” को रुपमा लिन थालिएको छ । यसकारण पनि मानिसहरुमा चियाको लत लाग्दै गएको पा...
घ्यूमा ५ चीज मिलाएर खानुस् निको हुन्छ यस्ता समस्या access_timeअसोज ३, २०७८
नेपाली भान्सामा घ्यूको प्रयोग धेरै खानेकुरामा हुने गर्छ । दाल, सागसब्जी, रोटी आदिमा घ्यू हाल्ने गरिन्छ । घ्यूले खानाको स्वाद मात्रै होइन, यसले स्वास्थ्यका लागि पनि धेरै फाइदा पुर्याउँछ । स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार घ्यूसँग अन्य औषधिय गुण भएका चीजहरु मिसाएर खाँदा विभिन्न स्वा...
हरेक बिहान खाली पेटमा सख्खर र तातोपानी access_timeअसोज २, २०७८
हामी व्यस्तताका कारण स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका हुन्छौँ । स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी जे भेट्यो त्यही खान्छौँ । लामो समयसम्म काम गर्ने र खाने समयलाई ध्यान नदिने बानीले भविष्यमा हामी गम्भीर रोगको सिकार हुन पुग्छौँ । त्यसैले हरेक दिन बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हा...
महिनावारीमा देखिने यस्ता लक्षण ‘ब्लड क्यान्सर’ को सङ्केत access_timeअसोज २, २०७८
कहिले काहीँ सामान्य देखिने लक्षणहरूलाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर समस्या आइपर्न सक्छ । जसकारण ज्यान समेत जान सक्छ । विशेष गरी, महिनावारीको समयमा देखिने हरेक लक्षणहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । डेलीमेलका अनुसार बेलायतमा बस्दै आएकी १९ ...
सुन्दर र बेदाग अनुहारका लागि ‘ब्लु टी’ access_timeअसोज १, २०७८
प्रायः व्यक्तिहरु बिहान तातो चिया पिउने गर्छन् । बिहान कालो चिया र ग्रिन टि पिउनु फाइदाजनक मानिन्छ । कालो चियाले पेटका रोगहरु कम गराउन मद्दत गर्छ भने ग्रिन टिले तौल कम गर्न मद्दत गर्छ । कालो चिया र ग्रिन टि मात्र होइन शरीरका लागि ब्लु टि पनि उत्तिकै फाइदाजनक छ...
स्वास्थ्यतर्फका ३ अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप खरिदमा अड्चन access_timeभदौ ३१, २०७८
केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यका तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । संसद्बाट समयमै अध्यादेश पारित हुन नसक्दा कोभिड – १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो) संश...
७ दिनमा मधुमेह कम गर्ने एक चीज access_timeभदौ ३१, २०७८
पछिल्लो दुई वर्षमा विश्वभर मधुमेहका रोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । बढ्दो उमेरका मानिसहरु मात्र नभइ बालबालिका र युवावस्थाका व्यक्तिहरु पनि मधुमेहको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । रगतमा चिनीको मात्रा बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्याहरुको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । मधुमेहका रोगीहरुले खा...
उपचारका ७ गलत तरिका : घाउमा थुक र पोलेको ठाउँमा बरफ लगाउनु घातक access_timeभदौ ३१, २०७८
साना–साना चोटपटक र स्वास्थ्यमा आउने समस्याको उपचारका लागि घरमा नै ‘फस्र्ट एड बक्स’ राखिएको छ । यसमा डेटोल, कटन, कैंची, पट्टी, ब्यान्डेज, एन्टिसेप्टिक क्रिम र अन्य सामान्य औषधिहरु राखिएको हुन्छ । प्राथमिक उपचारबारे सचेतना फैलाउन हरेक वर्षको सेप्टेम्बर १४ ...
होसियार ! स्क्रब टाइफसले ज्यान जान सक्छ access_timeभदौ ३१, २०७८
काठमाडौँ । ज्वरो आएपछि एक युवा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालमा जाँच गर्न आए । उनले ज्वरोसँगै ढाडमा कालो पाप्रो देखिएको पनि चिकित्सकलाई बताए । चिकित्सकले प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउँदा ती युवामा ‘स्क्रब टाइफस’ भएको प्रमाणित भय...
के घ्यू कुमारीले स्तनको आकार बढाउन मद्दत गर्छ ? access_timeभदौ ३१, २०७८
हरेक महिला आफ्नो फिगर परफेक्ट होस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि महिला विभिन्न प्रकारका उपायको पनि सहारा लिन्छन् । सुगठित शरीरले मानिसको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउँछ । साथै आत्मविश्वास पनि बढाउँछ । महिलाले आफ्नो फिगर उत्कृष्ट राख्नका लागि स्तनको आकारमा पनि विशेष ध्यान ...
नर्भिकले पाठेघर सम्बन्धी समस्या भएका महिलाहरुका लागि निःशुल्क ओपीडी सेवा दिँदै access_timeभदौ ३०, २०७८
काठमाडौं । नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले पाठेघर सम्बन्धी समस्या भएका महिलाहरुका लागि निःशुल्क ओपीडी सेवा दिने भएको छ । अस्पतालले निःशुल्क ओपीडी अभियान अन्तर्गत आउने शनिवार प्रजनन क्यान्सरको विषयमा निःशुल्क सेवा संचालन गर्ने जनाएको छ । आउने शनिवार नर्भिक अस्पताल...
केएमसीमा नेपालकै ठूलो एनआईसीयू access_timeभदौ २९, २०७८
काठमाडौँको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक सुविधासहितको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष र वाल रोग सघन उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालमै हालसम्म प्रयोगमा नरहेका उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याएर केएमसीले नवजात शिशु र बाल र...
पेट र कम्मरको दुखाइ मिर्गौला पत्थरीको लक्षण access_timeभदौ २९, २०७८
मिर्गौलामा पत्थरी हुँदा असहनीय पीडा हुन्छ । मिर्गौलामा पत्थरी हुँदा पेट र कम्मर दुख्छ । मिर्गौलामा विभिन्न कारणले पत्थरी बन्छ । विशेषज्ञका अनुसार पानी कम पिउनु नै पत्थरीको मुख्य कारण हो । यसका साथै, गलत खानपान पनि पत्थरी बन्ने कारण हुनसक्छ । चिकित्सकहरुले खानपानमा सुधार...
महिलामा देखिने ७ लक्षण बाँझोपनको सङ्केत access_timeभदौ २९, २०७८
बाँझोपन महिलाहरूका लागि गम्भीर समस्या बन्दै गइरहेको छ । प्रजनन क्षमतामा कमी आउँदा गर्भाधान गर्न समस्या हुने गर्छ । महिलामा विभिन्न कारणले गर्दा बाँझोपनको समस्या आउँछ । ओभ्युलेसन डिसअर्डर, फ्यालोपियन ट्युबमा क्षति हुने, एन्डोमेट्रियोसिस, युटेरस वा सर्भिक्ससँग जोडिएका व...
९७ वर्षकी बृद्धको अल्का अस्पतालमा हिपको आधा जोर्नी फेर्ने शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न access_timeभदौ २८, २०७८
ललितपुर । अल्का अस्पतालमा ९७ वर्षिय बृद्धको हिमीआर्थोप्लाष्टिको शल्यक्रिया सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ । ललितपुर खोकनाकी ९७ वर्षकी गणेशमाया शाहीको हिमीआर्थोप्लाष्टि अर्थात हिपको आधा जोर्नी फेर्ने शल्यक्रिया सफल भएको हो। अस्पतालका चिकित्सक शिवचन्द्र अमात्यको टोलीले श...
गर्भनिरोधक औषधिको विकल्प : गर्भाधान रोक्ने एन्टिबडी access_timeभदौ २८, २०७८
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले गर्भाधान रोक्ने एन्टिबडी निर्माण गरेका छन् । गर्भनिरोधक औषधिहरूको विकल्पको रुपमा गर्भाधान एन्टिबडी बनेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । उक्त एन्टिबडीले गर्भनिरोधक औषधिको रुपमा काम गर्छ । यो गर्भाधान रोक्ने हर्मोनको प्रयोग नहुने तरिका हो । यसमा...
बेसारको प्याक लगाएपछि गर्न नहुने ५ गल्ती access_timeभदौ २८, २०७८
वर्षौंदेखि बेसार सुन्दरताका सामाग्रीहरुमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विशेषगरी एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिइफ्लामेट्री कम्पोनेन्ट पाइने भएकाले यसले छालामा हुने विभिन्न समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्छ । बेसारलाई बेसन, आँटा वा दुधमा मिसाएर लगाउने गर्दा यसले राम्रोसँग काम गर्छ ।&n...
के हो निपाह भाइरस ? कसरी बच्ने ? access_timeभदौ २८, २०७८
भारतमा निपाह भाइरसका बिरामी देखिन थालेपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सजग रहन आग्रह गरेको छ । एनआईभी भनिने निपाह भाइरसको सङ्क्रमण भरतमा देखिएकाले नेपालमा पनि फैलिने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्...
हृदयघातको खतरा कम गर्ने ९ पेय पदार्थ access_timeभदौ २८, २०७८
कलेजोमा बन्ने मैनजस्तो पदार्थलाई कोलेस्ट्रोल भनिन्छ । कोलेस्ट्रोल रगत र कोशिकाहरूमा पाइन्छ । शरीरका कोशिकाहरू, तन्तुहरू र अङ्गहरूमा हर्मोन, भिटामिन डी र पित्त थैलीमा पाइने बाइल जुस निर्माण हुन कोलेस्ट्रोलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । शरीरमा दुई प्रकारका कोलेस्ट्रोल...
दिमागलाई शान्त राख्ने र कपाल झर्न रोक्ने ३ प्रकारका तेल access_timeभदौ २७, २०७८
पछिल्लो समय मानिसहरु भागदौडको क्रममा थकित हुने गर्छन् । अधिकांश मानिसहरु थकान र व्यस्तताका कारण टाउको दुख्ने समस्याबाट पनि पीडित हुने गर्छन् । कामको चाप र थकानले टाउको दुख्ने मात्र होइन कपाल झर्ने समस्या पनि पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिको प्रयोग गर्नुभन्दा घर...